Al-Qaacida oo la xaqiijiyey inay qorsheysay weeraro ay ka gaysato London(Sawiro) – SBC
Al-Qaacida oo la xaqiijiyey inay qorsheysay weeraro ay ka gaysato London(Sawiro)
Hogaamiyaha cusub ee shabakada Al-Qaacida Saif al-Adel ee dhawaan badaley Cusaama Bin Ladin ayaa la xaqiijiyey in uu qorsheynayo weeraro xoog weyn oo kooxdiisu ay ka geystaan magaalada London ee caasimada UK, isagoo ku wargaliyey taageerayaashiisa inay burburiyaan London.
Saif Al-Adel ayaa wax yar ka dib markii lagu dhawaaqay inuu badalayo Cusaama Bin Ladin oo horaantii bishan lagu diley wadanka Pakistan ayaa wacad ku marey inay u aargudi doonaan hogaamiyahoodii. “Hogaamiyeheena cusub (Saif Al-Adel )wuxuu na amray inaan weerar lixaad leh ka geysano magaalada London, waayo wuxuu rumaysan yahay in UK ay laf dhabar u tahay Yurub, ayna tahay in la burburiyo” sidaasi waxaa yiri Ehsanullah Ehsan oo ah afhayeenka xarakada Taalibaan ee ay xulufada yihiin Al-Qaacida.
Markii ay soo baxdey hanjabaadan cusub ee ka soo baxdey Al-Qaacida waxaa aad loo adkeeyey amaanka magaalada London, iyadoo ciidamada Booliiska gaar ahaan kuwa qaabilsan amaanka gaadiidka dadweynaha ee British Transport Police (BTP) la siiyey awood dheeraad ah oo ah in markii ugu horeysay ay qaadan karaan hub iyagoo hubkaasi la raaci doona tareemada dhulka hoostiisa mara ee magaalada London iyo waliba inay ku sugnaan doonaan xarumaha tareemadaasi. Xoghayaha gaadiidka Philip Hammond ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo talaabada lagu hubayno ilaalada gaadiidka dadweynaha gaar ahaan Tareenada magaalada London, si looga hortago weeraro argagixiso.
Laanta Booliiska ee BTP, waxay qaabilsan tahay amaanka tareemada dhulka hoostiisa & korkiisa mara ee loo yaqaan Overground, and Underground, tareemada gobolada isaga goosha, waxaana ay ka kooban yihiin 29 kun oo ciidan ah.